Mpamatsy vola lehibe indrindra amin'ny volana voalohany amin'ny drafitra Sandbox Phuket
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Mpamatsy vola lehibe indrindra amin'ny volana voalohany amin'ny drafitra Sandbox Phuket
Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Efa iray volana teo ho eo izay no nanombohan'ny modely fizahan-tany Phuket Sandbox, ary nanomboka tamin'izay dia nandray mpitsidika iraisam-pirenena efa ho 10,000 i Thailand.
Ny tetika fizahantany Phuket Sandbox dia natomboka tamin'ny 1 Jolay 2021 volana lasa teo, 26 andro vitsy lasa izay.
Hatramin'io fotoana io dia efa ho 10,000 ny mpizahatany tonga nitsidika ary mikasa ny hiverina hitsidika ireo faritany hafa.
Ka avy taiza fotsiny no niavian'ireo nandany vola be indrindra tamin'io volana voalohany io?
Taorian'ny fanombohana ny tetika fizahantany Phuket Sandbox tamin'ny 1 Jolay 2021, mpizahatany iraisam-pirenena maro izay efa nody, no nilaza fa mikasa ny hamangy ny fanjakana indray miaraka amin'ny fianakaviany, ary mivoaka hitsidika ny faritany hafa toa an'i Bangkok sy Chiang Mai.
Raha ny filazan'ny mpitondra tenin'ny Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA), Dr. Thanakorn Wangboonkongchana, izay sekretera ny biraon'ny praiminisitra, taorian'ny ny Phuket Sandbox fandefasana, manakaiky ny 10,000 ny mpizahatany tonga nitsidika. Ny firenena mpitsidika 5 voalohany dia avy tany Etazonia, Fanjakana Mitambatra, Israel, Alemana ary Frantsa.